प्लेकार्डले भन्यो, द मिडिया इज द भाइरस - Googlepokhara
googlepokhara	प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन ०१, २०७७ समय: १५:२९:२६
फाइट अगेन्स्ट कोरोना स्क्याम तथा फ्रिडम फ्रन्ट नेपालले आज पोखरामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको छ । लकडाउन हटाउँ, जनजीवन सामान्य बनाउँ’ भन्ने नाराका साथ पोखराको चिप्लेढुंगा स्थित वीपिचोकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको संयोजक राजु कायस्थले जानकारी दिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा मिडियाहरु स्वयम भाइरस भएका भन्ने आशयका प्ले कार्डहरु बोकेका थिए ।
उनिहरुको प्लेकार्डमा प्रष्ट लेखिएको छ, द मिडिया इज द भाइरस । यसले मिडिया आफै भाइरस हो भन्ने आशय प्रस्ट हुन्छ । उनिहरुले मिडिया कोरोना तन्त्र नबजाउन प्लेकार्ड मार्फत अपिल गरेका छन् । खुट्टामा रातो चप्पल लगाएका र शरिरमा रातो जाँगे र धर्के स्विटर जस्तो देखिने टिर्शत र मुखमा सर्जिकल माक्स लगाएका एक बालकलाई ठम्याईएको एक पोष्टरमा लेखिएको छ, द मिडिया इज द भाइरस । साथमा उनकी आमाको हातमा रहेको पोष्टरमा भने लकडाउन हटाउँ, जनजिवन सामान्य बनाउँ लेखिएको छ । यस्तै प्लेकार्डहरु अरु सहभागीहरुले पनि बोकेका छन् ।
शान्तिपुर्ण जनप्रदर्शन भनिएको उक्त कार्यक्रममा एक जना शारिरीक अपांगता भएका एक व्यक्ति पनि सहभागी छन् । तस्विरमा देखाईए अनुसार उनको खुट्टामा समस्या छ । उनि सामान्य मानिस जसरी हिडडुल गर्न सक्दैनन् । तर, लकडानउका कारण दैनिक जीवन गुजार्न मुस्किल भएसंगै उनि सडकमा आईपुगेका हुन् । उनको हातमा ठम्यार्ईको पोष्टरमा हामी कहिलेसम्म अरुको दास बन्ने ? भनि सरकार तर्फ प्रश्न सोझ्याइएको छ । मलिन अनुहारमा प्रस्तुत उनि एक शारिरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुन् ।
प्रदर्शनमा महिलाहरुको समेत उल्लेखनिय सहभागिता देखिन्छ । व्यस्त सडकको एक छेउमा उभिएका उनिहरुले पनि सरकार लाई नै प्रश्न गरिरहेका छन् । ६ महिनाको लकडाउनमा ३ हजार बढि आत्महत्या विकल्प खोई ? काम गरेर देखाउनुस्, लकडाउन गरेर होईन् । उनिहरुले प्राकृतिक चिकित्सामा जोड दिन सुझाव समेत दिएका छन् । रोगले होईन भोकले मर्ने बेला आईसक्यो भन्दै सहभागीहरुले लकडाउनमा सरकारलाई मस्ती जनतालाई सास्ती भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन् ।
कोरोनालाई हाउगुजी भन्दै उनिहरुले लकडाउनको अवज्ञा गर्न आह्वान गरेका छन् । कोरोनाका नाममा विश्व स्वास्थ्य संगठनले आतंक फैलाईरहेको उनिहरुको आरोप छ । उनिहरुले गो ब्याक वल्ड इलाईटस् फ्रम नेपाल भनेका छन् । प्रदर्शनमा दर्जन बढि मानिसहरुको सहभागीता रहेको थियो । ६ महिना भन्दा लामो सन्त्रासपूर्ण लकडाउन, निषेधाज्ञा, शिल, भौतिक दुरीको निरन्तर प्रयोगले मानिसहरु भयभीत भएको भन्दै यसको मनोवैज्ञानिक असरहरुबाट समाजलाई मुक्त राख्नु पर्ने उनिहरुको माग छ ।